Dreams Khabar जुन केटीको फोटो खिच्यो, उसैसँग रात बितायो !
जुन केटीको फोटो खिच्यो, उसैसँग रात बितायो !
२०७५ भदौ १४ बिहिबार
काठमाडौं । हग हफनरको मृत्यु २०१७ को सेप्टेम्बर २७ मा अमेरिकाको लसएन्जल्समा भएको हो । उनी विश्वभरमा चर्चित पुरुष पत्रिका ‘प्लेब्वाई’का मालिक थिए । ९१ वर्षको उमेरमा निधन भएका उनले एकपटक अनौँठो अभिव्यक्ति दिएका थिए जसको कारण उनी चर्चित छन् ।
उनले प्लेब्वाईका हरेक ‘कभर पेज’ युवतीका साथमा रात बिताईसकेको बताउने गरेका थिए । प्लेब्वाई विश्वभरीका युवती, मोडल लगायतका न्यूड फोटो प्रकाशित गर्ने पुरुष पत्रिका हो । जसमा भारतीय मोडल शर्लिन चोपडाले पनि न्यूड फोटोसेसन गरेर सनसनी मच्चाएकी थिइन् ।
आफ्नो रसियन ‘लुक्स’ लागि परिचित हग हफनरको बारेमा भनिने त्यस्तो भनाई बकवास मात्रै पनि होइन । हफनरले एक पटक बताएका थिए कि प्लेब्वाईमा न्यूड फोटो प्रकाशित १०० जना मध्ये उनले ९९ जनासँग रात बिताईसकेका थिए ।
डोना मिशेल, मर्लिन कोल, लिलिएन मुलर, शैनन ट्वीड, ब्रान्डे राड्रिक, बार्बी बेन्टन, कारेन क्रिस्टी, सोन्द्रा थियोडर र केरी ले नामक यी युवतीहरु हगका ती प्रेमिकाहरु थिए, जसले हगमाथी ३ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बढीको मुद्दा लगाएका थिए ।
हगको याैन जीवनको बारेमा जान्ने व्यक्तिहरु हगको ‘क्षमता’प्रति आश्चर्य पनि प्रकट गर्छन् तर बुढेसकालमा पनि यौन‘सन्तुष्टी’ लागि हगलाई भने दुःखी हुनुपर्ने लाग्दैन । –एजेन्सीको सहयोगमा ।